सानो छँदाको साँचो कुरा भन्नु पर्दा-
म मेरो हजुरबाको मृत्युमा रोइन ।
मेरो कपुरी 'क' दुब्लाएर भने होइन
हो हजुरबालाई 'मुना-मदन' पढेर सुनाउँदा
म धर्धर्ती रोएको थिएँ
त्यति बेला म कुन संवेदनामा रोएको थिएँ-
थाहा छैन !
तर ताजा सम्झना छ
हजुरबा भन्नु हुन्थ्यो-
'छोरो मान्छे भएर रुनु हुँदैन ।'
मेरो हजुरबाको मृत्यु भएको कुरामा
किन-किन मलाई विश्वासै लाग्दैनथ्यो
हजुरबा न भूतसँग डराउनु हुन्थ्यो
न बाघसँग डराउनु हुन्थ्यो
अनि मलाई मृत्यु भनेकै भूत र बाघ हो भन्ने लाग्थ्यो
खैर आज हजुरबा बाँचेको भए
यो विकास र परिवर्तनलाई देख्नुहुन्थ्यो-
अचेल भूतहरु ठूला-ठूला भवनमा बस्छन्
बाघहरु विस्थापित/ लोप हुँदैछन्
बाघहरुलाई सुरक्षा दिनु पर्ने बेला आएको छ
तर स्यालहरु बाघको छाला ओडेर झुक्क्याउँदै छन्
यी दुबैथरी त्यति भयङ्कर लाग्दैनन्
सायद यिनीहरु जनतासँग डराउँछन्
र हिजो-आज मुनाहरु पनि भोट पुर् याइन्छन्
तर मुनाहरु फर्केर नआएको सुर्तामा
अचेल मुनाहरुलाई बेच्न पनि मदनहरु पछि पर्दैनन् ।
मलाई माफ गर्नुस् हजुरबा !
म दिनहुँजसो नरोई रहन सक्दिन
मलाई डर लाग्छ
मेरी मुनालाई पनि कसैले बेचि पो दिन्छ कि !
कतै मैले नै मेरी मुनालाई बेचिदिन्छु कि !!
हो मभित्र पनि एउटी मुना छे
र सायद म रुन्छु
हजुरबा ! के साँच्चिकै छोरो मान्छे रुनु हुँदैन
कि कतै म छोरी मान्छे त होइन
म मेरो हजुरबाको मृत्युमा रोइन ॥